အခုကော ဘယျလောကျမြား နီးလို့လဲ – Shinyoon
အခုကော ဘယျလောကျမြား နီးလို့လဲ
သူမချေါရငျ ကိုယျလဲ မချေါပဲ နနေိုငျတဲ့ မာနလေးထားကွညျ့ပါလို့ ကြှနျမ ပွောတဲ့အခါ ပထမဆုံးတှေးကွတာက . . . ဝေးသှားမှာပေါ့ တဲ့ ။
အဲ့ဒီအတှေးတှကွေောငျ့ပဲ နာကငျြခံစားနရေတာလေ ။ ဝေးသှားမှာစိုးလို့ မခဈြတော့မှာ ဆိုးလို့ ပဈသှားမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ သောကတှနေဲ့ မာနတှေ ဘယျလောကျ ခဝါခခြဲ့ပွီးပွီလဲ တှေးကွညျ့ပါ ။ နောကျဆုံး ကိုယျပဲ ဒဏျရာတှနေဲ့ တဈယောကျတညျးကနျြခဲ့တာပဲ ရှိတယျ တကယျ မခဈြခဲ့တဲ့သူအတှကျတော့ လမျးခှဲဖို့ အကွောငျးပွခကျြ မြိုးစုံရှိနနေိုငျတာပဲလေ ။
အတှေးတှေ အမြားကွီးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ မသတျပဈလိုကျနဲ့လေ အတှေးတှမြေားရငျ အိပျရေးပကျြမယျ အလုပျပကျြမယျ သဘာဝတရားကွီးကတော့ ဒီအတိုငျးလညျပတျနတောပါပဲ ကိုယျ့ကမ်ဘာနဲ့ ကိုယျ့ရငျထဲမှာပဲ ဒဏျရာတှေ ပွညျ့နှကျနမှောလေ ။ ဘ၀မှာ ပြျောအောငျ နတေတျခငျြရငျ ကိုယျ့အတှေးတှကေို အရငျဆုံး ဂရုစိုကျမှ ရမယျ ။
သလေောကျအောငျခဈြနပေါစေ မိနျးမ မာနဆိုတာလေးတော့ နဲနဲလေးဖွဈဖွဈ ထားပါ ။ စပွီးခဈြကတညျး အဆုံးထိခဈြကွမယျလို့ တှေးတတျတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အကငျြ့က အားနညျးခကျြကွီး ဖွဈမသှားစနေဲ့ ငါ ဘာလုပျလုပျ သူ ခှငျ့လှတျနမှောပဲလို့ တဈဖကျက တှေးသှားတဲ့အခါ ကိုယျ့ကို ပွနျစာနာဖို့ သတိမရတတျကွတော့ဘူး ။
နှလုံးသားကို အလိုလိုကျမှားတဲ့အခါ ဥပမာ . . . ဆိုးဆိုးကောငျးကောငျး သူမှ သူဆိုတာ သစ်စာလို့ လူတှကေ ပွောကွတယျ တကယျတမျး လကျတှမှေ့ာ ကိုယျ့အပျေါတဈစကျမှ မကောငျးလဲ ဖကျတှယျထားတာပဲ မဟုတျလား ။ လူတဈယောကျ ကိုယျ့အနား လာရပျရုံနဲ့ တဈသကျလုံး ထှကျမသှားတော့ပါဘူးလို့ တှေးတတျတဲ့ အတှေး အလှယျတကူလေး ယုံကွညျတတျတဲ့ စိတျလေး ဖြောကျပါ ။
သူတောငျမှ စ မချေါတာ ကိုယျလဲ မချေါပဲ နမေယျဆိုတဲ့ မာနလေး နဲနဲလေးပဲ ထားကွညျ့ ။ ဝေးသှားမှာပေါ့လို့ တှေးမိတဲ့အခါ တကယျလို့ ဝေးသှားကွတယျဆိုရငျ ဝေးသှားတယျလို့ပဲ မှတျရုံပဲ ရှိတော့တာလေ ။ တဈဖကျကသာ ဝေးသှားခငျြစိတျလေးသာ မရှိရငျ မရမက ဆကျသှယျလာမှာပဲဆိုတာလေး သိထားဖို့လိုတယျ ။
သူမခေါ်ရင် ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲ နေနိုင်တဲ့ မာနလေးထားကြည့်ပါလို့ ကျွန်မ ပြောတဲ့အခါ ပထမဆုံးတွေးကြတာက . . . ဝေးသွားမှာပေါ့ တဲ့ ။
အဲ့ဒီအတွေးတွေကြောင့်ပဲ နာကျင်ခံစားနေရတာလေ ။ ဝေးသွားမှာစိုးလို့ မချစ်တော့မှာ ဆိုးလို့ ပစ်သွားမှာစိုးလို့ ဆိုတဲ့ သောကတွေနဲ့ မာနတွေ ဘယ်လောက် ခဝါချခဲ့ပြီးပြီလဲ တွေးကြည့်ပါ ။ နောက်ဆုံး ကိုယ်ပဲ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့တာပဲ ရှိတယ် တကယ် မချစ်ခဲ့တဲ့သူအတွက်တော့ လမ်းခွဲဖို့ အကြောင်းပြချက် မျိုးစုံရှိနေနိုင်တာပဲလေ ။
အတွေးတွေ အများကြီးနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မသတ်ပစ်လိုက်နဲ့လေ အတွေးတွေများရင် အိပ်ရေးပျက်မယ် အလုပ်ပျက်မယ် သဘာဝတရားကြီးကတော့ ဒီအတိုင်းလည်ပတ်နေတာပါပဲ ကိုယ့်ကမ္ဘာနဲ့ ကိုယ့်ရင်ထဲမှာပဲ ဒဏ်ရာတွေ ပြည့်နှက်နေမှာလေ ။ ဘ၀မှာ ပျော်အောင် နေတတ်ချင်ရင် ကိုယ့်အတွေးတွေကို အရင်ဆုံး ဂရုစိုက်မှ ရမယ် ။
သေလောက်အောင်ချစ်နေပါစေ မိန်းမ မာနဆိုတာလေးတော့ နဲနဲလေးဖြစ်ဖြစ် ထားပါ ။ စပြီးချစ်ကတည်း အဆုံးထိချစ်ကြမယ်လို့ တွေးတတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်က အားနည်းချက်ကြီး ဖြစ်မသွားစေနဲ့ ငါ ဘာလုပ်လုပ် သူ ခွင့်လွှတ်နေမှာပဲလို့ တစ်ဖက်က တွေးသွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ကို ပြန်စာနာဖို့ သတိမရတတ်ကြတော့ဘူး ။
နှလုံးသားကို အလိုလိုက်မှားတဲ့အခါ ဥပမာ . . . ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း သူမှ သူဆိုတာ သစ္စာလို့ လူတွေက ပြောကြတယ် တကယ်တမ်း လက်တွေ့မှာ ကိုယ့်အပေါ်တစ်စက်မှ မကောင်းလဲ ဖက်တွယ်ထားတာပဲ မဟုတ်လား ။ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်အနား လာရပ်ရုံနဲ့ တစ်သက်လုံး ထွက်မသွားတော့ပါဘူးလို့ တွေးတတ်တဲ့ အတွေး အလွယ်တကူလေး ယုံကြည်တတ်တဲ့ စိတ်လေး ဖျောက်ပါ ။
သူတောင်မှ စ မခေါ်တာ ကိုယ်လဲ မခေါ်ပဲ နေမယ်ဆိုတဲ့ မာနလေး နဲနဲလေးပဲ ထားကြည့် ။ ဝေးသွားမှာပေါ့လို့ တွေးမိတဲ့အခါ တကယ်လို့ ဝေးသွားကြတယ်ဆိုရင် ဝေးသွားတယ်လို့ပဲ မှတ်ရုံပဲ ရှိတော့တာလေ ။ တစ်ဖက်ကသာ ဝေးသွားချင်စိတ်လေးသာ မရှိရင် မရမက ဆက်သွယ်လာမှာပဲဆိုတာလေး သိထားဖို့လိုတယ် ။